Wararkii ugu dambeeyay Ethiopia iyo Sudan, Dagaal ay qorshaynayaan iyo - Ogaden24 | Ogaden24
Wararkii ugu dambeeyay Ethiopia iyo Sudan, Dagaal ay qorshaynayaan iyo
Feb 21, 2021 - Aragtiyood
Wali waxaa taagan xiisada u dhaxaysa dalalka Sudan & Itoobiya, xiisadan ayaa salka ku haysa dhulka xuduudka labbada dal oo ay Sudan baddi qabsatay. Labba maalin kahor taliyaha ciiddamada Itoobiya, Birhanu Julla ayaa dhigiisa Koonfur Sudan heshiish labba geesoda la saxeexday. Waxayna labbada dal ku heshiiyeen innay arrimaha xuduudka, ciddamada iyo sirdoonka iska kaashadaan.
Iskaashigan Itoobiya iyo Koonfur Sudan dhexmaray ayaa u muuqda mid ka cadhaysiiyay dalka Sudan. Wasaarada arrimaha dibada ee dalka Sudan ayaa maalintii shalay war murtiyeed ka duwan kuwii hore soo saartay, waxayna ku hanjabeen in ciiddamada Itoobiya ee nabbad ilaalinta u jooga ay soo saari doonaan. Sudan waxay sheegtay innaan lagusii kalsoonan karin ciddamada Itoobiya ee dalkaas ku sugan, siddoo kale waxay Itoobiya ku eedeeyay innay fadeexad iyo gaf ugaysanayso. Sudan waxay ka xumaatay haddalka Itoobiya ee ah “Gacan saddexaad ayaa Sudan addeegsanaysa”.
Ciiddamo shan kun gaadhaya oo Itoobiyana ayaa ku sugan goobta Sudan iyo Koonfur Sudan isku hayaan ee lagu magacaabo Abiyei.
Dhulka oo garaya 4,000 square miles ayay labbadaas dal isku hayaan, waana dhul uu shidaal ka buuxo, halka qaybaha kalena beerashada ku habboon yihiin. Waana sabbabta dhulkan layskugu haysto, haddii ay Itoobiya dhulkan ka baxdana waxay keeni kartaa in dagaal ka dhex qarxo dalalka Sudan iyi Koonfur Sudan.
Itoobiya ayaa u muuqata mid xiisadii xuduudka ka haysatay gobalka ku balaadhisay, waxayna gacanta middig ku hayaan Eritrea, halka ay koonfur Sudan iskaashi milatari la galeen.Waana sabbabta Sudan wajiga u baddashay, wallow dalal kale daaha dabadiisa u fadhiyaan, islamarkaana aan la fududaysan karin, haddana arrinta koonfur Sudan ayaa noqonaysa shaqo guri Sudan loo diray.
W-Q:- Macalinka Soomaliyeed(Ms)
© 2021 Ogaden24 - All rights reserved.